मैले केही अनावश्यक हठ गरेको भए म जनताको अगाडि उठबस गर्न तयार छु – नगरप्रमुख पौडेल
By vijayafm on	 April 24, 2019 देश, नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, फोटो फिचर, राजनीति, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
गैँडाकोट नगरपालिकामा प्रायशः विवादहरु सतहमा आउने गर्दछन् । विकास र सुशासनका लागि पक्ष र विपक्षबीच वादविवाद हुनु स्वाभाविक पनि हो । वादविवादले नै सकरात्मक गन्तव्यको खोजी गर्दछ । गैँडाकोट नगरपालिकामा २०७५ मा केही विवादहरु भए । विवादहरुका बाबजुद पनि नगर विकास र सुशासनका लागि मार्गदर्शक कामहरुसम्पन्न भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तथा निययमहरु बनेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तर्फ काम भएका छन् । राष्ट्रिय रुपमा देखिनै कुनै विशेष काम हुन नसकेपनि जनताको सेवा र सुविधाका लागि नगरकार्यपालिका निरन्तर अघि बढीरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नगरले के कस्ता कामहरु गर्यो, काम हुन ढिलाइका कारण केके हुन् ? आगामी कार्यदिशा लगायतका विभिन्न जिज्ञासाहरुमाथि गैँडाकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलसंग सामुदायिक रेडियो विजय एफएम १०१.६ को कार्यक्रम हाम्रो नगरमा यसै साता चर्चा गरियो । प्रस्तुत छ विजय खबर पत्रिकाका सम्पादक श्रीधर उपाध्यायसंग भएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
गैँडाकोट नगरपालिकाको २०७५ कस्तो रह्यो ?
हामी विशेषत ः लामो समय पश्चात स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि आएका थियौँ । गैँडाकोटमा निर्वाचन पश्चात् गैँडाकोट पार्टी मात्र हुनुपर्ने थियो । हामी सबैको विचार, साझा विचार हुनुपर्दथ्यो । यो हुन सकेन । तर पनि यो बुझाइमा ढिलै भएपनि सकरात्मक बन्दै गएका छौँ ।
२०७५ मा केही विवादमा रुमलियो गैँडाकोट किन ?
विवादमा पर्न हुँदैनथ्यो । हामी ७६ जनाको टिम र कार्यपालिकाको २८ जनाको टिम एउटै हुनुपर्दछ । यो हुन सकेन । तथापी एक जना कर्मचारीको नियुक्ति नीतिगत रुपमा ठीक छैन मैले भनेको थिएँ । यसले पनि ६ महिना विवादमा धकेल्यौ । केही ठूला संस्थाको नक्सा पासको सन्दर्भमा विवाद भयो । २ करोड भन्दा बढी अनियमितता या भ्रष्टाचार प्रमुखबाट भयो भन्ने कुराहरु पनि आए । मिथ्याका आरोपहरुले पनि विवादमा तान्यो । गिता छोएर गलत गर्नु हुँदैन भन्ने संस्कारबाट हुर्किएका हामीले गलत गर्ने गुञ्जायस नै हुँदैनथ्यो । विवादहरुले समयमात्र नष्ट गरेको छ ।
नगरप्रमुखको नाताले सबैलाई मिलाउने तँपाईको कर्तव्य होइन ? मिलाउन नसकेको की नखोजेको ?
मिलाउने सन्दर्भमा मैले नगर प्रमुखको पदबाट हट्ने कुरा त भएननी । मिलाउने सन्दर्भमा मैले केही अनावश्यक हठ गरेको भए म जनताको अगाडि उठबस गर्न तयार छु ।
गैँडाकोट नगरपालिकाको क्लीन सिटी अभियान किन तुइयो ?
अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न लाग्यो । जसले नेतृत्व गर्दछ उसले नीति बनाउनु पर्ने रहेछ । २८ जना कार्यपालिकाका सदस्य मध्ये जसले राम्रो नीति बनाएर ल्याउँछ त्यसलाई पास गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ, विषयगत समितिका कुरा छोडौँ एक छिन् । नगरपालिकाले गरेको योजनामा एक वर्षमा एउटा यो काम चाँही गरियो भन्ने खालको राष्ट्रिय योजना खोइ त ? म नगरबासी समक्ष यस विषयमा क्षमा चाहन्छु । तथापी पनि आफ्नै प्रयत्नमा भूमिगत सिंचाइ र विद्युतीकरण तर्फ राम्रो काम भएको छ ।
क्लीन सिटीको अभियान छोडेर, केही समूह र समुदायले आयोजना गरेका सफा गैँडाकोट, हरियाली गैँडाकोट बनाउने कार्यक्रम शुभारम्भका लागि पुग्दा कस्तो महशुस हुन्छ ?
मैले भनेनी, हामीले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमहरु गैँडाकोट १ देखि १८ सम्म प्रभावकारी रुपमा अघि जानुपर्दथ्यो, तर जान सकेन । तथापी संघसंस्थाका साथीहरुले गर्न थाल्नुभयो । यसलाई पनि राम्रो मान्नुपर्दछ । हामीले उठान गर्यौँ । अरुले अभियान चलाउनुभयो ।
फोहोर व्यवस्थापनमा नगरको काम निकै फितलो छ, किन हो ?
व्यवस्थापनको पाटोमा फाहोर वर्गिरणको पाटोमा बढी खटिनु पर्ने थियो । पहिले गाविस तहमा फाहोर निस्किदैनथ्यो । अहिले बढी निस्कन्छ । कुहिने र नकुहीने फोहोरको व्यवस्थापनमा जानुपर्ने छ । समस्या बढ्दै गएपछि अब हामीले निजि क्षेत्रलाई व्यवस्थापनका लागि आह्वान समेत गरेका छाँै । केही फर्महरु आउनुभएको छ । अब हामी सहकार्यको माध्यमबाट अघि बढ्दै छाँै । घरघरमा तरकारी उत्पादनको कार्ययोजना सहित अघि बढ्ने योजनामा छौँ । यसले फोहोरको समेत व्यवस्थापन हुने विश्वास लिएका छौँ ।
फोहोर उठाउने काम नियमित छैन, समय तालिकामा हुँदैन भन्ने नगरबासीको गुनासो छ ?
हो यहाँले भनेको जस्तो एक दुई दिन तलमाथि भएको छ । केही साथीहरुले फोन समेत गरेर गुनासो गर्नुभएको छ । प्रत्येक टोल सुधार, टोल सञ्जालका पदाधिकारीहरु गैँडाकोटलाई समृद्धी तर्फ लैजाने काममा तल्लीन हुनुहुन्छ । उहाँहरुसंग समन्वय गरेर हामीले व्यवस्थापन मिलाउने छाँै ।
कालीगण्डकीको पानी, जनताको लगानी यहाँको चुनावी एजेण्डा कता हराइरहेको छ ?
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । यो संगै तीन वटा मुद्धा मेरो चुनावी एजेण्डा थिए । विषयवस्तु हामीले उठाने गरेका छाँै । यसका लागि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसंग कुरा भइरहेको छ । यो दीर्घकालिन योजना हो । स्थानीय सरकारको बलले मात्रै हुन सक्ने कुरा होइन ।अर्को तर्फ यसका लागि नीजि क्षेत्रका साथीहरु लागि सक्नुभएको छ । मौलाकालिका हाइड्रो पावर दर्ता गरेर अध्ययन गरिरहनुभएको छ । वातावरणीय प्रभावको अध्ययन भइरहेको छ । नीजि क्षेत्रका साथीहरुका लागि सहजीकरणको काम हामीले गर्ने हो ।
अर्को कुरा मौलाकालिकामा केवलकारको कुरा गरेको थिएँ । केवलकारका लागि नगरपालिकाले स्वीकृती दिइसकेको छ । चन्द्रागिरी हिल्सले यो काम गर्दैछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन समेत भइसकेको छ ।
अर्को मैले भनेको थिएँ । बैकल्पीक बाटोको कुरा । बृटिश क्याम्पदेखि झरे खोलासम्म । तथापी यसलाई बृटिशक्याम्प देखि झरेखोलासम्म नभएर उत्तर दक्षिण चीन भारत नाका जोड्ने गरी बैकल्पीक राजमार्ग जोड्ने राष्ट्रिय महत्वका साथ राष्ट्रिय योजना बनेको छ । यी मैले अघि सारेका योजना दीर्घकालिन योजना हुन् । यसका लागि काम भइरहेको छ ।
यसैगरी गैँडाकोट नगरपालिका भित्र विद्युतीकरणको काम गैँडाकोटको १८ बाहेक सबै स्थानमा काम सम्पन्न गरेको छ । ७६ सालको आधाआधी नगरको सबै क्षेत्रमा विद्युतिकरणको काम सम्पन्न हुने छ । सिंचाइको तहमा बोरिङको काम प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छौँ । गैँडाकोट ७, ६ र ८ मा मकै जोनको रुपमा काम गरेका छौँ । प्रधानमन्त्री सुन्तला जोन कार्यक्रम अघि बढीरहेको छ ।
गैँडाकोट ३ र १८ लाई बाख्रा पालन पकेट क्षेत्रको रुपमा प्रारम्भीक काम सुरु गरेका छाँै । सम्भावना छ । यसैगरी प्रत्येक वडामा आरन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने र एउटा परिवारलाई रोजगारी दिने योजनामा अघि बढेका छौँ । जनताले काम गर्छु भन्नुप¥यो, नगरपालिका सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छ । असार मसान्त भित्रै १२ देखि १५ परिवारलाई सिलाइ मेसिन हस्तान्तरण गर्ने योजनामा छाँै । म सबै जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दछु । छलफल गरेर अघि बढौँ । छलफल नै नगरी पोल खरिद गर्दा गैँडाकोट १८ मा समस्या भयो । छलफल गरेर अघि बढीयो भने प्रभावकारी हुन्छ, छिटो हुन्छ ।
नगरप्रमुखले कुरा सुन्दैन भन्छन् नी ?
म सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु । मेरो कार्यकाल र यस अघिका कार्यकालको मूल्याङ्कन होस् । म सुन्न तयार छु । जनप्रतिनिधिहरु छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्ने नितान्त आवश्यक छ ।
सिसि क्यामेरा सडकमा राख्ने काम किन प्रभावकारी हुन सकेन ?
तारको समस्याले मात्र हो । तार चोरी हुने समस्याले हो । तर यसलाई तत्कालन मर्मत तथा जडानका लागि म तयार रहेको छु ।
२०७५ चैत्र मसान्तसम्म बालमैत्री नगर बनाउने कुरा त हुन सकेन नी ?
गैँडाकोट १ बाहेक अन्य वडा बालमैत्री वडा बनाउन सकिएन । ९६ जनाले हस्ताक्षर गरेर सम्पन्न गर्ने चाँहि भनेका थियौँ । बजेटको कमिले पनि समस्या भयो । आगामी आर्थिक वर्षमा यो कडाइका साथ अघि बढाउन म तयार रहेको छु ।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएका छन् । यसलाई कसरी संरक्षण गर्नुहुन्छ ?
विजय विकास स्रोत केन्द्रले संरक्षण गरेको जग्गा गैँडाकोट २ को नारायणी किनारको जग्गाको सन्दर्भमा मैले मुख्यमन्त्रीसंग समेत कुरा गरेको छु । सके कानुनी तवरबाटै फिर्ता गराउने छु । त्यो नभए नगरसभाबाट नीतिगत रुपबाट त्यसको संरक्षणका लागि कटिबद्ध भएर लाग्नेछु ।
अन्त्यमा नगरको विकासका लागि अन्य के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
गैँडाकोट नगरपालिकाको १८ मा बर्थिङ सेण्टर स्थापना हुनेछ । पहिला विद्युतीकरणको काम सम्पन्न भएपछि यसले पूर्णता पाउनेछ । यसैगरी पितौँजी स्वास्थ्य चौकीलाई नगर अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने छु । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि काम गर्नेछु । विद्यालयको र विद्यार्थीको पोशाकको रङ्ग एउटै बनाउने छु । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । सिंचाइलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गरिनेछ । समृद्धि नगरको परिकल्पनालाई साकार पार्न नगरबासीको ठूलो हात रहन्छ । सकरात्मक विकासका लागि सबैलाई आह्वान गर्दछु । धन्यवाद ।